Ezikiel 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 “Ma gị onwe gị, nwa nke mmadụ, were mma agha dị nkọ. Were ya mere agụba e ji akpụ isi, jirikwa ya kpụọ isi gị na ajị agba gị,+ jirikwa ihe e ji atụ̀ ihe kee ntutu isi gị na ajị gị ụzọ atọ. 2 Ị ga-agba otu ụzọ n’ụzọ atọ ọkụ n’etiti obodo ozugbo ụbọchị niile nke nnọchibido ahụ zuru.+ Ị ga-achịrịkwa otu ụzọ n’ụzọ atọ ọzọ. Ị ga na-egbu ya mma agha gbaa obodo ahụ gburugburu,+ ị ga-aghasasịkwa otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ikpeazụ ka ikuku buru ya, m ga-amịrịkwa mma agha chụwa ha.+ 3 “Chịrị ole na ole n’ime ya, werekwa uwe mwụda gị fụchie ya.+ 4 Ị ga-achịrị nke fọrọ chịba n’ime ọkụ ka ọkụ rechapụ ya. Ọkụ ga-esi na ya gazuo ụlọ Izrel dum.+ 5 “Nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘Nke a bụ Jeruselem. Emewo m ka ọ dịrị n’etiti mba dị iche iche, ala dị iche iche gbakwara ya gburugburu. 6 O wee nupụ isi ná mkpebi ikpe m site n’ime ajọ omume karịa mba niile,+ nupụkwa isi n’ụkpụrụ m karịa ala ndị gbara ya gburugburu, n’ihi na ha jụrụ mkpebi ikpe m, ha ejeghịkwa ije n’ụkpụrụ m.’+ 7 “Ya mere, nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘Ebe ọ bụ na unu na-akpa aghara+ karịa mba niile gbara unu gburugburu, unu ejeghịkwa ije n’ụkpụrụ m, unu edebeghịkwa mkpebi ikpe m;+ kama unu mere dị ka mkpebi ikpe nke mba ndị gbara unu gburugburu si dị, ọ̀ bụ na unu emeghị otú ahụ?+ 8 Ya mere, nke a bụ ihe Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru: “Lee, mụ onwe m ga-emegide gị,+ gị obodo, m ga-emekwa ihe e kpere n’ikpe n’ime gị n’anya mba niile.+ 9 M ga-emekwa n’ime gị ihe m na-emetụbeghị nakwa ihe m na-agaghị eme ihe yiri ya ọzọ n’ihi ihe arụ gị niile.+ 10 “‘“Ya mere, ndị bụ́ nna ga-eri ụmụ ha n’ime gị,+ ụmụ ga-erikwa ndị nna ha, m ga-eme ihe e kpere n’ikpe n’ime gị, chụsasịakwa ndị gị niile fọdụrụnụ ebe niile.”’*+ 11 “‘Ya mere, dị nnọọ ka m dị ndụ,’ ka Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova kwuru, ‘n’ezie, ebe ọ bụ ebe nsọ m ka i ji ihe arụ gị niile+ na ihe gị niile jọgburu onwe ha merụọ,+ ọ bụkwa mụ onwe m ga-egbukpọ ndị bi n’ime gị,+ anya m agaghị eme ebere,+ mụ onwe m agaghịkwa enwe ọmịiko.+ 12 Otu ụzọ n’ụzọ atọ n’ime gị, ọrịa na-efe efe ga-egbu ha,+ ụnwụ ga-ala ha n’iyi n’ime gị.+ Otu ụzọ n’ụzọ atọ ọzọ, a ga-eji mma agha gbuo ha gburugburu gị. Otu ụzọ n’ụzọ atọ fọziri ka m ga-achụsasị ebe niile,+ m ga-amịrị mma agha chụwa ha.+ 13 M ga-awụpụ iwe m dum,+ m ga-emekwa ka ọnụma m nke m wụkwasịrị ha dajụọ,+ m ga-akasikwa onwe m obi;+ ha ga-amarakwa na mụ onwe m, Jehova, ekwuwo okwu n’ihi na m chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa,+ mgbe m ga-awụkwasị ha ọnụma m dum. 14 “‘M ga-emekwa ka ị bụrụ ebe a lara n’iyi na ihe nkọcha n’etiti mba ndị gbara gị gburugburu, n’anya ndị niile na-agafe agafe.+ 15 Ị ga-aghọkwa ihe nkọcha+ nakwa ihe a na-ekwu okwu ọjọọ banyere ya,+ ihe atụ ịdọ aka ná ntị+ na ihe na-eme ka mba ndị gbara gị gburugburu tụọ egwu, mgbe m ga-eji iwe na ọnụma na ịba mba dị ukwuu mee ihe e kpere n’ikpe n’ime gị.+ Mụ onwe m, Jehova, ekwuwo ya. 16 “‘Mgbe m ga-ezipụ ajọ akụ́ bụ́ ụnwụ ka ọ bịakwasị unu,+ nke ga-abụ maka mbibi, ya bụ, akụ́ m ga-ezipụ ka o bibie unu,+ m ga-emekwa ka ụnwụ dị ukwuu n’ala unu, m ga-agbajisị mkpara unu ji ekonye achịcha.+ 17 M ga-ezipụ ụnwụ na ajọ anụ ọhịa ka ha bịakwasị unu.+ Ha ga-emekwa ka ị gbara aka nwa. Ọrịa na-efe efe+ na ọbara+ ga-esikwa n’etiti gị gafee, m ga-emekwa ka mma agha bịakwasị gị.+ Mụ onwe m, Jehova, ekwuwo ya.’”